China Fused PT Elbow Connector orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Anhuang
Anhuang manokana amin'ny Loadbreak Connector elbow, manome ny Loadbreak Elbow Connector avo lenta izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray.
Elbow Connector dia famaranana plug-in voaaro sy voafitaka tanteraka ho an'ny fifandraisana tariby ambanin'ny tany mba hizara ny rafitra herinaratra fanodinana pad-mound, boaty sampana famatsiana herinaratra manodidina azy, boatin'ny sampana tariby miaraka amina lozam-pifamoivoizana. Ny mpampitohy kiho sy ny sisin'ny bushing dia misy ny singa ilaina amin'ny fifandraisana tapaka rehetra. Izy io dia afaka miara-miasa amin'ny 200A Bushing insert ary 200A jack of T-11 Connector, 200A Junction, load break bushing insert (load break rotatable feed-thru insert), fitaovana bushing ary 600A / 200A bushing extender. Izy io dia afaka miasa switch of 200A loading current. Ny teboka fanandramana dia ampiasaina hampifandraisana ny Indikator an'ny Voltage Hot. Ny Load break Elbows dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fingotra EPDM vita amin'ny solifara avo lenta sy conduction semi-conduction.
Ny fizarana hazo fijaliana mitondra dia 35-50mm2 ho an'ny tariby 15kv. Ny tsipika conductive W / ARC dia mamono ny asany.
15/200 mpampifandray Elbow AH AZT-15 / 200A 15kV 200A
Previous: 15kV 200A Asiana Bushing
Manaraka: 15kV 200A Loza Break Elbow Connector